रगतको Agglutination - यो ... रक्त समूह र agglutination
रगतको Agglutination - रातो रक्त जीवाणुहरू र antigens बोक्न अन्य कक्षहरू को रूप मा सम्बन्ध गाँसिसकेको र तलछट को जम्मा छ।
प्रक्रिया जो विशिष्ट पदार्थ हो agglutinins, को प्रभाव अन्तर्गत ठाउँ लिन्छ। यी पदार्थ को भूमिका lectins वा एंटीबडी कार्य।
रगत समूह निर्धारण मा agglutination सम्भावित प्रकार
Agglutination विशिष्ट र गैर विशिष्ट छ। पहिलो मामला मा, प्रतिक्रिया तीन घटक को सहभागिता साथ स्थान लिन्छ:
electrolytes (isotonic समाधान लागू)।
रगत समूह निर्धारण मा agglutination सबै सम्भव प्रकार छन्, तर यो मात्र मामला छैन।
कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ?
रगत agglutination प्रतिक्रिया संक्रामक एजेन्ट पहिचान गर्न प्रयोग गरिन्छ। एकै समयमा यो settles, र यो तलछट पाउन सजिलो छ। माथि उल्लेख रूपमा यो प्रक्रिया, प्रयोग गरिन्छ, र रगत समूह को सङ्कल्प। यो के थप छलफल गरिनेछ छ।
सुविधाहरू के-के हुन्?
रातो रक्त antigens एक र प्रकार बी यी एंटीबडी ά र क्रमशः β बाँध्न समावेश गर्दछ। रगत समूह र agglutination प्रतिक्रिया:
1,0(ά, β) - erythrocytes को सतह मा कुनै antigens;
2, एक (β) - वर्तमान प्रतिजन र एक β एंटीबडी;
3, (ά) - ά मा प्रतिजन र एंटीबडी समावेश;
4, एबी (00) - त्यहाँ दुई antigens हो, एंटीबडी अनुपस्थित छन्।
यो antigens पहिले नै भ्रूण अवलोकन गरिएका टिप्पण लायक छ। यस एंटीबडी सन्दर्भमा, तिनीहरूले जन्म, जीवन को पहिलो महिना पछि देखिन्छन्।
रक्त समूह मान्छे को अनुकूलता मा निर्भर गर्दछ। यो भ्रूण आमा शरीर को तिरस्कार कारण छ। अर्को शब्दमा, यो बच्चा को रगत को antigens एंटीबडी समावेश गर्दछ। यस मामला मा त्यहाँ अमिल्दो छ। साथै, रगत रगत सार्ने काम खातामा लिनुपर्छ।
रगत समूह र agglutination प्रतिक्रिया - अक्सर चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ जो उपयुक्त अवधारणाहरु।
परीक्षण अघि, केही निर्देशनहरूको पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई केही खानेकुरा र औषधीको प्रयोग हटाउन समय छ। यो परिणाम सही बनाउन मद्दत गर्नेछ। एक डाक्टर नियुक्त पालन गर्नुपर्छ जो सिफारिसहरू। विभिन्न प्रयोगशालाहरुमा प्राप्त मान नै दायरा नहुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई, त्यो छ, तिनीहरूले अलि फरक छन्।
परीक्षण को लागि अवस्था
रक्त समूह सही निर्धारित थियो, यो सही उपकरण चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यी समावेश:
नुनखरा र विंदुक;
मानक सीरम izogemagglyutiniruyuschie;
ड्राई बरतन प्लेट,4क्षेत्रहरु विभाजित छन् जो।
त्यहाँ परीक्षण शर्तहरूमा आवश्यकताहरू:
? कोठा तापमान 16 सी माथि छ;
1:10 को अनुपात मा रगत र सीरम को मात्रा को प्रयोग;
विश्वसनीय परिणाम5मिनेट भित्र प्राप्त छन्।
माथिको मुख्य नियम र उपकरण देखाउँछ। रगत agglutination धेरै तरिकामा बाहिर गर्न सकिन्छ, र तिनीहरूलाई प्रत्येक अगाडि विशिष्ट आवश्यकताहरु राखे।
agglutination मार्फत रगत समूह निर्धारण सम्भव विधिहरू:
तीव्र विधि "Eritrotest-gruppokart" को एक सेट प्रयोग गरेर।
रगतको Agglutination रोगी गरेको रातो रक्त प्रयोग विकास भए। मानक sera पनि जो ज्ञात antigens समावेश, प्रयोग गरिन्छ।
एक सपाट प्लेट मा 1 ड्रप चार sera राखिएको। त्यसपछि, ग्लास छड प्रयोग गरेर यसलाई जांच गर्न बिरामीको रगत प्रविष्ट गर्नुभयो। यस मामला मा यो आँखा dropper प्रयोग गर्न सुविधाजनक छ। यो अनुपात 1:10 पालन गर्नुपर्छ। सीरम र रगत बिस्तारै मिश्रित। पाँच मिनेट भित्र तपाईं मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
परीक्षण को डिकोड परिणाम सरल विधि
को सीरम मा निर्धारित समय पछि अवलोकन ज्योति खस्छ। केही रातो रक्त को agglutination यसलाई छैन अरूलाई मा, (ठीक गुच्छे) देखा परेको छ कि देख्न सकिन्छ।
त्यहाँ निम्न विकल्पहरू छन्:
सबै सीरम नमूनाहरू कुनै प्रतिक्रिया - 1 समूह;
clotting2नमूनाहरू लागि बाहेक सबैतिर भयो -2समूह;
नमूना3मा प्रतिक्रिया मात्र कमी -3समूह;
agglutination सबैतिर भयो - समूह 4।
यसरी, मुख्य कुरा हो - सही को सीरम वितरण गर्न। त्यसपछि परिणाम समस्या छैन गुप्त। रगत agglutination कमजोर छ भने, यो फेरि विश्लेषण गर्न सिफारिस गरिएको छ। सानो गुच्छे को मामला मा उनि माइक्रोस्कोप अन्तर्गत ल्याए छन्।
कहिलेकाहीं सजिलो तरिका सही रगत समूह असम्भव छ। Agglutination त्यसपछि क्रस-जवाब को विधि प्रयोग गरेर बाहिर। पहिलो embodiment को परीक्षण नभई यहाँ महत्त्व मानक erythrocytes छन्। रोगी रगत, परीक्षण ट्यूब मा टाइप छ centrifuged, र त्यसपछि विंदुक थप अध्ययन को लागि सीरम पम्प्ड छ।
त्यो2घटेको एक प्लेट राखिएको को राशि छ, यो त पोत rocking द्वारा एक मानक रातो रगत समूह र बी सामग्री मिश्रित छ भन्छन्।
क्रस-प्रतिक्रिया विधि को परिणाम
पाँच मिनेट पछि, नमूनाहरू परीक्षा लागि तयार छन्। विकल्पहरू छन्:
सम्बन्ध गाँसिसकेको दुवै घटेको देखा पर्यो - समूह 1;
गुच्छे नमूनों को कुनै पनि अवलोकन छैन -4समूह;
2 वा3(दुरुस्त रगत घुमाउरो आधारमा) समूह - प्रक्रिया नै नमूना मा देखिन्छ।
विधि Colyclons प्रयोग
रक्त समूह यस्तो agglutination विधि बाहिर छ कृत्रिम विकल्प sera प्रयोग निर्धारण गर्न। तिनीहरूले Colyclons भनिन्छ। तिनीहरूले eritrotesty (गुलाबी र नीलो, क्रमशः) को रूपमा जानिन्छ ά कृत्रिम विकल्प र β-agglyutinov समावेश गर्दछ। प्रतिक्रिया रगत र बिरामीको रातो रक्त बीच हुन्छ।
यो विधि सबैभन्दा सही र विश्वसनीय छ। मूलतः यो पुन सर्वेक्षण आवश्यकता छैन। परिणाम मूल्यांकन पारंपरिक विधि को मामला मा रूपमा त्यसैगरि मा बाहिर छ। सुविधा छ चौथो रगत समूह आवश्यक विशिष्ट कृत्रिम विकल्प (विरोधी अटल बिहारी) संग प्रतिक्रिया पुष्टि हुनुपर्छ। यसबाहेक, आसंजन सोडियम क्लोराइड समाधान थप्दा त्यहाँ अवलोकन छैन।
"Eritrotest-gruppokart" को एक सेट संग तीव्र प्रविधी
रक्त समूह को संकल्प मा विश्लेषण गर्ने सम्भावित विधिहरू विचार, यो विधि यसको आफ्नै विशेषताहरु छ टिप्पण लायक छ। तिनीहरूले परिणाम मूल्यांकन हुन मात्र होइन प्रयोगशाला तर पनि क्षेत्रमा गर्न सक्ने निष्कर्षमा। एक विशेष किरा प्रयोग गरेर अध्ययन सञ्चालन गर्न। यसलाई जो त्यहाँ पहिले नै सुकेको अभिकर्मकों छन् तल मा प्वालहरू भएको कार्ड समावेश छ। विरोधी अटल बिहारी, विरोधी-एक र आरएच कारक निर्धारण गर्न अनुमति विरोधी-बी, विरोधी लागू-डी, साथै।
विशेष प्रशिक्षण आवश्यकता छैन यो विधि, औँला लिइएका छ कि यो परिरक्षकों समावेश हुन सक्छ रक्त प्रयोग गर्न अनुमति छन्। पहिलो, तपाईं सामाग्री भंग गर्न पानी एक थोपा प्रत्येक राम्रो बनाउन आवश्यक छ। कि पछि, बिस्तारै भड्काए, रगत थप्नुहोस्। तीन मिनेट पछि, परिणाम प्राप्त हुनेछ।
कहिलेकाहीं परीक्षण पछि प्राप्त डाटा, वास्तविकता अनुरूप छैन। यो घटना केही कारक मा निर्भर गर्दछ।
त्यहाँ झूटा प्रतिक्रिया तीन प्रकारका छन्:
Psevdoagglyutinatsiya। उत्पन्न गर्दैन साँचो सम्बन्ध गाँसिसकेको, रातो रक्त बस rouleaux को रूप मा थपिएका छन्। यदि तपाईं थप्न, तिनीहरूले नुनखरा को घटेको एक जोडी तोड्न। यस्तो घटना भएको माइक्रोस्कोप अन्तर्गत मान्यता छ।
चिसो रगत agglutination। यस्तो प्रतिक्रिया अध्ययनको लागि अवस्थाको प्रतिकूल थिए घटनाको अवलोकन छ। तल 16 तापमान? सी, सम्बन्ध गाँसिसकेको देखाउन सकिन्छ।
Panagglyutinatsiya। रगत परीक्षण परिणाममा संक्रमण को उपस्थिति मा गलत हुन सक्छ। यो घटना पनि sepsis मा, क्यान्सर को मामला मा सम्भव छ।
Agglutination चिकित्सा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो रक्त समूह निर्धारण गर्न मात्र होइन, तर पनि रोग को causative एजेन्ट, साथै संक्रमण उपस्थिति पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ। मुख्य कुरा प्रक्रिया को लागि तयारी मा चिकित्सकको सिफारिसहरू लीन छ। चिकित्सा कर्मचारी लागि जाँदा, आफ्नो कार्य अनुकूल अवस्था र अनुपालन सबै नियमहरु संग सिर्जना छ। यसरी मात्र हामी सटीक परिणाम जब रगत agglutination हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
के vertebrae बीच उपास्थि डिस्क गर्छ? मानव मेरुदण्ड: संरचना
चिकित्सा शब्द "जरुरी" - यो अर्थ राख्छ?
सुन्दर कर्टकटहरू: कसरी ठीक तरिकाले मेशिन काट्न
आरोपण फिर्ता लिने - गर्भावस्था को एक चिन्ह
ध्रुवीय शार्क। वासस्थानमा शार्क। रीफ शार्क
डिजाइन र विनिर्देशों "टोयोटा Prius"
को OVA एनिमे के हो? प्लट वा शाखा को वाहेक जारी?
रमणीय सुनगाभा Vanda
रूस औद्योगिक शहर: देश को सबै भन्दा ठूलो औद्योगिक केन्द्र को सूची